Semalt - Super Guide On How To Extract Amazon Product Details Using Python
Kugadzira mapepa makuru emasayiti akaita seAmazon haisi nyore. Iyi nzvimbo inogona kukubvumira kuti uwane maji 400 webhusi nehuwandu. Amazon uye mamwe makuru e-commerce web sitesiti anoshandisa ASIN, izwi rinokosha rinoshandiswa ne-e-commerce websites kuti ione nhamba yezvigadzirwa mune databata.
Mutsara uyu, iwe uchadzidza kugadzira chigadzirwa chechigadzirwa chichazoshandiswa kushandiswa kutsvaga tsanangudzo yemiti nemashoko emitengo kuAmazon - ventilatori trifase. Kune vanotanga, Python mutauro unogadziridza chinangwa chinogadziridza pamagwaro ekuverenga. Hewa nzira dzekuti ungashandise sei chigadzirwa chako chekare.
Kuongorora zvinhu zvinowanikwa muma Amazon
Kugadzirwa kweWebhu kunowanzoshandiswa pakubudisa mazita makuru e data kubva kune e-commerce website. Nechigadzirwa chinokanganisa, iwe unogona nyore nyore kutarisa pasi kuwanikwa kwemaoko, kuongororwa kwevatengi, uye kuchinja mumatengo.
Kuongorora maitirwo ari kutengesa kuAmazon
. Kuti urarame makwikwi akasimba mumisika yemari, unofanirwa kutarisana pasi nevakwikwidzi vako. Kwemakore mashomanana apfuura, kuparadzira nzvimbo kubva kune e-commerce nzvimbo kwakave basa rakaoma uye rakaoma. Nyasha yePython, kunyora idzi masayiti zvakaitwa nyore.
Chigadzirwa chinonyangadza chinotsvaga zvinyorwa kubva kuAmazambique nekusimbisa ASIN yavo. Nyaya yakabudiswa inoshandiswa nevashambadzi vemari kuti vaongorore kuti zvinhu zviri kutengesa sei kuAmazon. Zvipfeko zvinoshandiswa nokuda kwezvinangwa zvakasiyana-siyana. Heano zvimwe zvimwe zvinoshandiswa zvezvigadzirwa zvechigadzirwa.
Kuongorora mazano emakoni uye maongororo
Kuongorora zvinhu zvemashambadziro API
Kuongorora huwandu hwehutano uye pachena
Python inokurudzirwa kwazvo kana zvasvika pakutsvaga nekuparadzanisa mafaira kubva kune mawebsite ane simba akadai seAmazon. Zvisinei, tisati tatora zvimwe zvakadzama pamusoro pokuti tingatora sei data kubva kune e-commerce websites, ngatitarirei tsanangudzo dzinogona kubviswa kubva kune idzi. Heino pini-yakarongedzwa rondedzero iyo inoratidzira seti yedata iyo inogona kuwanikwa neyakagadzirwa zvishoma.
Mutsara uyu, nheyo huru inoshandisa Python kutora uye kuparadzanisa HTML. Kudzorera deta yako uchishandura Python kwakafanana nekukanda kwakarurama pane chinhu. Ndizvo zviri nyore. Dhadhare HTML kubva pane peji yako yakasarudzika yekombiji uye uone zvose XPath yechinhu chinotarisirwa chakafanana nemutengo uye tsanangudzo yemiti.
Une zita rekushandisa here? Kana hongu, regai tiende. Ingoridza zita rekodeti yako pamba yako yekukurumidza. Mushure mokunge muwana kode, shandure iyo neAASS yako pachako. A JSON output file (data. json) inosanganisira mazita ose eAINs data ichagadzirwa.
Mitemo uye mazwi anotonga e-commerce website. Kana uchinge wanyora, edza kuputsa marashiro ewebsite yewekudzivisa kusaisa pasi. E-commerce websites dzinogadzirisa vashandisi kubva pakuwana mapeji anopfuura mazana mana nechikamu. Nechigadzirwa chePython chinoputika, unogona nyore kuona zvigadzirwa zvekuverenga uye kushandiswa kwemari.